(UPDATE 2) Halgame Shiikh Cali Maxamuud (Shiikh Cali Tuure) Oo Ku Geeriyooday Dalka Nederland – Great Banaadir
(UPDATE 2) Halgame Shiikh Cali Maxamuud (Shiikh Cali Tuure) Oo Ku Geeriyooday Dalka Nederland
Waxaa lagu soo waramayaa in Halgame Shiikh Cali Maxamuud (Shiikh Cali Tuure) uu ku geeriyooday Dalka Nederland oo ay dadka qaar u yaqaanaan Holland.
Allaha u naxariisto Halgame Shiikh Cali Maxamuud (Shiikh Cali Tuure), waxaa uu kamid ahaa Halgameyaashii Xisbiga Leego (Lega dei Giovani Somali [Somali Youth League: SYL]) ee uu tafaxeytay in Soomaaliya ay ka madaxbanaanaato Gumeysigii Itaaliya, wuxuuna kamdi noqday sanadkii 1947-dii.
Bishii Maarso 26-deedi, sanadkii 1969-kii waxaa uu kamid ahaa Murashixiintii Xisbiga Leego ee u tartamayay iney kamid noqdaan Baarlamaanka Jaamhuuriyadda Soomaaliya, waana uu kusoo guuleystay Kursigii Xildhibaanada ee uu u tartamayay.
21-dii Oktoobar, sanadkii 1969-kii waxaa taladii dalka Soomaaliya xoog kula wareegay 20 sarkaal oo katirsanaa Ciidamada Xooga Dalka iyo 5 sarkaal oo katirsanaa Ciidamada Boliiska, waxaana hogaaminayay Taliyehii Ciidamada Xooga Dalka Jeneraal Maxamed Siyaad Barre.
Isla maalintii 21-da Oktoobar, waxaa la xiray Wasiir Koowaadkii Dowladda Soomaaliya Halgame Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal iyo dowladdii u dhisneyd dalka Soomaaliya ee uu hogaaminayay Halgame Cigaal, waxaana lasii kala diray 123-dii Xildhibaan ee uu ku jiro Halgame Shiikh Cali Maxamuud (Shiikh Cali Tuure).
Waxaa la baabi’yay Maxkamdii Sare ee Dalka Soomaaliya, waxaana la mamnuucay 9-kii Wargeys ee Dalka Soomaaliya kasoo bixi jiray. Isku soo wada duub, waxaa la baab’yay Dastuurkii Jamhuuriyadda Soomaaliya.
Soomaaliya waxaa markaasi ka bilowday Talis Kelitalis ah ee uu hogaaminayo Jeneraal Maxamed Siyaad.
Sanadkii 1972-dii waxaa uu Halgame Shiikh Cali Maxamuud (Shiikh Cali Tuure) uu kamid noqday Garyaqaanadii Difaacayay Jeneraal Maxamed Ceynaanshe Guuleed, Jeneraal Salaad Gabeyre Kediye, iyo Gaashaanle Dhexe Cabdulqaadir Dheel Cabdulle; kadib markii saraakiishaasi lagu eedeeyay iney afgambi la damacsanaayeen taliska militeriga ee xooga ku qabsaday Soomaaliya ee uu hogaaminayay Kelitaliye Jeneraal Maxamed Siyaad Barre.
Markii la toogtay Jeneraal Maxamed Ceynaanshe Guuleed, Jeneraal Salaad Gabeyre Kediye, iyo Gaashaanle Dhexe Cabdulqaadir Dheel Cabdulle taariikhduna aheyd 3-dii Luuliyo 1972-dii, waxaa uu Halgame Shiikh Cali Tuure uu u baxsaday Dalka Sacuudi Caraabiya, isagoo kamid noqday mucaaradki diidanaa Taliska Kelitaliska ah ee ka dhisnaa Soomaaliya isla markaana uu hogaaminayay Kelitaliye Jeneraal Maxamed Siyaad Barre.
Intaasi waxey aheyd taariikhda halganka Marxuum Shiikh Cali Maxamuud (Shiikh Cali Tuure) oo lasoo koobay, waxaana soo diyaariyay Tifatiraha Sare ee Warbaahinta Banaadir Weyne (The editor in chief of The Great Banadir Media).
Taariikhda halgamaha inteeda harsan waxaa laga akhrisan karaa halkan hoose, iyadoo laga soo qaatay Radio Dalsan.
Taariikh Nololeedkii Sh Cali Maxamuud Oo Ku Geeriyooday Holland
Allaha u naxariistee Sheekh Cali Sheekh Maxamuud (Sheekh Cali Tuure), Wuxuu ku dhashay Tuulada Jameeco Fiddo oo 25km bari ka xigta magaalada Jowhar ee gobolka shabeellaha dhexe sanadka markuu ahaa 1925ti. Isla tuuladaas ayuu ku bartay, kuna xafiday quraanka kariimka ah,dhameystayna sannadki 1941dii. Sannadka markuu ahaa 1943dii wuxuu u soo wareegay magaalada Jowhar, halkaasoo uu ka bilaabay barashada culuumta Fiqiga Islaamka.
Sannadkii 1945 wuxuu soo galay magaalo madaxda Muqdisho, oo uu si fiican uga sii bartay Naxwaha Carabiga iyo culuumta Fiqiga masaajidka Waafle ee degmada Boondheere ku yaalla, wuxuuna wax ka aqristay Sheekh Xuseen Cadde, Sheekh Yuusuf Macallin Xasan Muudeey iyo sheekh Muxiddiin Raage. 1947dii wuxuu ku biiray ururki Leegada ee SYL, wuxuuna ka mid noqday Guddiga degaanka Jowhar (Comittato Locale Di Giohar), wuxuuna ka ahaa xubin aad u firfircoon oo siyaasadda ka shaqeysa.
Sannadkii 1952dii wuxuu ku soo noqday magaalada Xamar oo uu ka bilaabay inuu ganacsi ka sameeyo kana furtay degmada Xamarweyne goob ganacsi. Isla sanadkaas wuxuu ku biiray ciidanka Ilaalada Dhaqaalaha (Guardia di Finanza) oo markaas ka jiray dalka. Isla markiiba waxaa loo furay tababar lagu baranaayo xeerka ilaalinta canshuuraha iyo dokumeentiga dekadaha. Sannadkii 1954-tii waxaa loo furay tababar kale oo sarkaalnimo toban qof oo uu ka mid yahay, nasiibdarrase waa laga saaray tababarki sabab siyaasadeed awgeeg asaga iyo saddex kale oo Abgaal ah (dhacdadi Gaala jebshe darteed).
Sannadki 1955-tii asagoo weli askari ah ayuu imtaxaan u galay Qaalinimo, waana ku guuleystay, sidaas darteed ayuuna uga tegay askarinimadi oo uu garsoore ku noqday. Bishii Jennayo 1956dii wuxuu qaali ka noqday degmada Hobyo, halkaasoo uu ka shaqenaayay ilaa bishi Juunyo 1958dii oo loo soo bedelay degmada Marka, oo uu ka shaqeynaayay ilaa iyo sannadkii 1960dii. Bishi maajo 1960kii waxaa loo soo bedelay Xamar maxkamadda gobolka Benaadir. Isla sannadkaas asagoo shaqeynaaya ayuu haddana wuxuu waxbarasho ka bilaabay iskoolki culuumta Islaamka (Diciplina Islamico) oo uu dhiganaayay afar sano oo waxbarasho caadi ah iyo laba sano oo takhasus ah. 1964tii waxaa loo magacaabay Guddoomiyaha maxkamadda rafcaanka gobolka Benaadir kaddib marki uu ku guuleystay imtaxaanki qiimeynta garsoorayasha. Isla sannadkaas wuxuu ka qeyb galay Doorashadi Xildhibaannadi barlamaanka,oo uu iska soo sharaxay degmada Jowhar, kumase guuleysan.
Sannadki 1967dii wuxuu bilaabay kulliyadda sharciga, asagoo weli kulliyaddii dhigta ayuu haddana sannadki 1969kii ka qeyb galay mar labaad doorashooyinki xildhibaannada barlamaanka ee degmada Jowhar. waana ku soo guuleystay, nasiib darrase waxaa barlamaankaas kala diray Kacaankii Maxamed Siyaad.
Sannadki 1972di wuxuu ka qalin jebiyay kulliyadda sharciga ee Jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed. Kaddib wuxuu noqday qareen u dooda dadweynaha, ilaa iyo sannadki 1976dii
Isla sannadkaas 1976dii wuxuu aaday dalka Sacuudi Caraabiya, halkaasoo uu ka bilaabay hawlo ganacsi, kana abuuray shirkad weyn oo badeecada ka soo daabusha dalka Sacuudiga oo keenta dekadaha Soomaaliya.
1983dii wuxuu ku soo laabtay Xamar, asagoo weli ganacsiga sii wata ayuu haddana ku laabtay 1986di qarennimadi ilaa dagaalki 1990ki uu ka bilowdo.
1991di wuxuu ku biiray ururki USC, waxaana loo magacaabay Xoghayaha arrimaha gudaha ee ururka.
1993di wuxuu ka qeyb galay shirki dib u heshiisiinta Soomaaliyeed e lagu qabtay magaalada Addisababa ee dalka Itoobiya, kana qaatay door weyn oo lama ilaawaan ah.
Bishii Febbaraayo 1995ti wuxuu u soo wareegay degaan ahaan waddanka Holland
Wuxuuna laba mar ka qeybgalay shirki dib u heshiisiinta Soomaaliyeed ee lagu qabtay dalka Keenya ,bilowgi marki Eldoret lagu qabtay iyo gebagebadi marki loo soo wareejiyay Magaalada Nairobi, asagoo qeyb weyn kaqaatay ololaha lagu raadinaayay dib u heshiisiinta ummadda Soomaliyeed iyo dib u soo celinta Qaranki Soomaaliyeed ee burburay, nasiib wanaag taas hadda waxbaa ka bilaaban.
Fadhiga Golaha Shacabka Oo Laga Saaray Xubnihii Ka Socday Aqalka Sare